musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » New Premium Sport Compact Mota
- Integra Prototype inosheedzera kudzoka kweiyo iconic nameplate kune iyo Acura mutsara
- 2023 Integra ichave yemhando yepamusoro yemitambo compact ine coupe-yakaita sedenga remba uye inosiyana-siyana-masuo mashanu ekusimudza dhizaini.
- Chekutanga fekitori-turbocharged Integra inotora simba kubva kune yakakwirira-yakabuda 1.5-litre ine VTEC®
- Yakagadzirirwa vanofarira, 6-speed manual transmission ichapihwa
-Zvakasarudzika zvinoshuvira uye zvinogoneka, itsva Integra kutanga kutenderedza $30,000 kana yasvika gore rinouya
Acura nhasi yakapa nyika kutarisa kwayo kwekutanga-inotarisirwa zvikuru Integra itsva, zvichiratidza kudzoka kwezita rinopembererwa rezita kuAcura lineup. Yakapedzwa mukurova Indy Yellow Pearl pendi yakakweretwa kubva kuNSX, iyo Integra Prototype chiratidzo chakasimba chekunze dhizaini yezvese-nyowani 2023 Acura Integra, iyo ichave nemutengo wakatenderedza $30,000 painosvika kune vatengesi veAcura gore rinouya.
Akafuridzirwa yapfuura Integras, kusanganisira yepakutanga yakabatsira kuburitsa mhando yeAcura muna 1986, iyo 2023 Integra ichava iyo itsva gedhi performance modhi muAcura lineup, premium sport compact ine evocative yemagonhi mashanu uye inonakidza-ku-kutyaira mweya. Iyo yekutanga-yakare fekitori-turbocharged Integra ichafadza chizvarwa chitsva chevatyairi vanofarira vane inowanika matanhatu-speed manual transmission, shoma inotsvedza musiyano uye yakakwirira-inobuda 1.5-lita injini, ine VTEC® hongu.
"Integra ndeimwe yemhando dzakasarudzika munhoroondo yeAcura," akadaro Jon Ikeda, Mutevedzeri weMutungamiriri uye Acura Brand Officer. "Iyi Integra nyowani, icharamba ichiburitsa pane yekutanga yakasarudzika zvinoshuvira asi zvinogoneka nzvimbo yemusika, nekuita kwemanzwiro uye maitiro, zvakasanganiswa nekusiyana-siyana uye kushandiswa kunotsvakwa nevatengi vemazuva ano. "
Yakagadzirwa muJapan, iyo itsva Integra yekunze styling yakashinga inoratidzira zvinoshamisa padenga remba uye liftback tailgate, ichipa yakasarudzika-yakafanana mugwagwa kuvapo. Dudziro yemazuva ano yemutsara weIntegra, yerudzi rwechishanu modhi inoratidza zviratidzo zvechiratidzo sezita rakadhindwa reIntegra pasi pemwenje wepadivi pemutyairi uye mwenje wepadivi pemutyairi.
Muscular rear vhiri arches uye ine hukasha yekumashure fascia ine mbiri-exhaust finishers inosimbisa Integra's wide track. Yakafemerwa neyakapfuura Integra modhi, iyo yakasarudzika yekumashure masitaera inoratidzira yakafara, imwe-chidimbu taillights ine inoenderana "Chicane" siginecha yechiedza. Seri kweIntegra Prototype's matte-finish 19-inch split-five spoke mavhiri akakurisa mabhureki eBrembo™ ane mavara-keyed Indy Yellow caliper, achipa simba rekumisa rinoshamisa uye kutaridzika kwehasha.